Waa Maxay Sheekada “Sawirkan” Gilgilay Dunida iyo Baraha Bulshada#dhacdo cajiib ah | Xaqiiqonews
Waa Maxay Sheekada “Sawirkan” Gilgilay Dunida iyo Baraha Bulshada#dhacdo cajiib ah
waxaa baraha bulshada qabsaday sawirka gabar yar oo u dhalatay Argentina gabadhaasi oo isku dayeysa in ay biya cabto iyadoo dul fooraarsan goob ay ku jiraan biyo wasaq ah oo jidka fadhiya.
sawirkani waxaa lagu baahiyey baraha bulshada iyadoo uu soo jiitay malaayiin qof oo sawirka daawaday waxaana sawirkani la qaaday xilli ay isku dayeysay gabadhani yar in ay biyo ka cabto meel wado ah oo biya ay fadhiyaan waxaana xilligu uu ahaa mid aad u kulul oo gaaraya 37 degrees.
Gabadhani yar ayaa ka mid ah dadka asalka ah ee ku hadla luuqada ‘MIBA GOARATI’ ee ku nool magaalada Posadas ee dalka Argentina waxaana caruurta magaaladani dagan ay caan ku yihiin tuugsiga madaama magaalada ay ku noolyihiin fuqarada.
sawirka ayaa waxaa qaaday wariyaha ‘Misiones Online’ xilli uu diyaarinaayey barnaamijka saadaasha hawada iyo heer kulka magaalada maalintii arabacada aheyd ee la soo dhaafay.
ka dib markii la baahiyey sawirka durbadiiba waxaa soobaxay dhaleeceyn caalami ah oo loo jeediyey qaramada midoobay gaar ahaan qeybta caruurta u qaabilsan ee UNICEF.